Akụkọ - Somefọdụ agụ ahịhịa ahịhịa na-eji ị maghị
Anyị maara na e nwere ọtụtụ ọdịdị nke ahịhịa igwe, ya mere o siiri anyị ike ịhọrọ. Kedu otu esi ahọrọ ahịhịa ahịhịa? Kedu otu esi edozi agụba nke igwe? Na otu esi eji ma debe ahihia ahihia ahihia? Onye editọ na-esonụ ga-ewebata gị.
Etu esi edozi ahihia nke igwe ahihia?
Mgbe ị na-agbanwe agụba nke ahịhịa ahịhịa, achọrọ ka o mee ka nkedo ahụ sie ike, gbanwee ya 1 / 4-3 / 4, tụgharịa na nut, megharịa ihe na-asacha, ọ bụrụ na onye ncha akwa nwere ike ịmegharị n'ụzọ dị nro, wee mee ka mkpụrụ ahụ sie ike ma lelee pad ahụ Ma agụba ahụ nwere ike ịmegharị , ọ bụrụ na ihe nkedo ahụ siri ike nke ukwuu, agụba agaghị emegharị. Mgbe etinyere ihe niile, nyocha ule, agụba na-agba ọsọ maka otu nkeji, jiri aka gị metụ ihe nkedo ahụ, ọ dị ọkụ ma ọ bụ dị oke ọkụ, ahịhịa ahịhịa na-egosi na ihe nkedo ahụ siri ike, biko gbanwee ọzọ.
Mee ezigbo ọrụ na nlekọta nke ahịhịa ahịhịa
Ngwongwo ahihia nke ahihia nke ugbua agagh enwe ike imeghari na uzo osisi ugbua di ugbu a, na onye nkpuchi ohuru ohuru agụba ahịhịa cutter nwere ike zuru ezu izute ugbu a orchard weeding ọrụ mkpa. Ojiji nke ndị na-egbusi ahịhịa maka arụmọrụ ahịhịa nwere ike ime ka arụmọrụ arụmọrụ ka mma. Enwere ike idobe ahịhịa ahịhịa na ala iji gbochie mbuze ala, chọọ gburugburu ebe obibi mma, jigide mmiri ma kọọ mmiri mmiri, ma mee ka ihe gbasara ala dịkwuo ala.
Etu esi eji ahịhịa cutter mma
A. Jiri mmanụ ụgbọala ruru eru na mmanụ injin, wee hụ na agwakọta ngwakọta nke ahịhịa ahịhịa (25: 1 ma ọ bụ 50: 1).
B. Mgbe nile (awa 25) na-enyocha ma dochie ikuku nzacha na ntanye ọkụ.
C. Mgbe ị rụsịrị mmanụ mmanụ, ịkwesịrị izu ike maka minit 10, ma hichaa gasị nke igwe mgbe arụchara ọrụ ọ bụla iji hụ na ikpochapu ọkụ.
D. Mgbe ị na-echekwa, ị ga-ehicha ahụ, hapụ mmanụ ọkụ agwakọtara, ahịhịa ahịhịa na-ere mmanụ ọkụ na vaporizer, wepụ plọg ọkụ, tinye 1-2ml mmanụ n'ime cylinder, dọpụta onye mbido 2-3 oge, Wụnye plọọkụ.
2. Ngwá Ọrụ
Ogologo mkpọchi naịlọn nke ahịhịa ahịhịa kwesịrị ịchịkwa (= 15cm). Mgbe ị na-eji agụba ahịhịa ahịhịa, agụba nke agụba kwesịrị ịgba mbọ, na agụba ya na ịma jijiji ekwesịghị iji ya.
(1) Udọ-maka ahihia di nro nke di mfe igbutu.
(2) Mpempe Square-tumadi maka nsogbu siri ike ma dị egwu dị ka ahịhịa amị.
(3) Rhombus pupụtara-maka osisi vaịn, obere osisi, na ndị siri ike.
Ntinye nke eriri igwe eji akwa ahihia
Wepu isi ahihia ahu, weputa ihe di n'ime ya ma gbagharia eriri ahihia. Ogologo eriri eriri ahụ ekwesịghị ịbụ ogologo oge, 10-15cm kwesịrị ekwesị, ọ naghị adị mfe iti, ọ dịghị mfe ịchịkwa, ọ dịkwa mfe imebi. Mgbe ị na-etinye, gbanye eriri na shaft ma ọ bụ isi mowing, ma dọpụta ụdọ site na ntụgharị ihu, ma ọ bụghị na eriri ahụ ga-apụta n'oge usoro mowing; ogologo nke eriri mowing na nsọtụ abụọ kwesịrị ịbụ otu, ma ọ bụghị na mowing ohere ga-ebelata n'ihi ahaghị nhata. Ngwunye ahịhịa ahịhịa na-adabara naanị maka ịkpụ ahịhịa na-eto eto, oke oke, ọbụnadị ahịhịa ochie nke emegoro, kwesịrị iji mma. Ndị na-esonụ bụ otú ifufe iheigwe eji asụ ahịhịa ịkpụ eriri.
(1) Wepu isi mowing, enwere ebe maka eriri iku n'ime.
(2) Gbanyụọ eriri osisi ahụ na ọkara, tinye ya n’ebe a kwụnyere eriri ụdọ ahụ, fegharịa ya n’ime.
(3) Mgbe ọnya ahụ fọrọ nke nta ka ọ gwụchaa, nyefee eriri osisi ahụ si n’okporo osisi dị n’akụkụ ya abụọ.
Nhọrọ nke lawn mower agụbadị ezigbo mkpa. Maka oge dị iche iche na nhọrọ ahịhịa ahịhịa ahịhịa kwekọrọ, ị ga-ahọrọ mma ahịhịa ahịhịa mma. Na mgbakwunye, ana m echetara onye ọ bụla na ị ga-ahọrọ ahịhịa nke ndị na-emepụta nha. Hangzhou Zhengchida nkenke Machinery Co., Ltd. na-edugaemeputa nke ubi ígwè pupụtara na China Nnọọ ịzụta.